Ambodin’Isotry, 67 Ha, Cenam: mampihorohoro amin’ny Kalach mihitsy ny mpanendaka | NewsMada
Ambodin’Isotry, 67 Ha, Cenam: mampihorohoro amin’ny Kalach mihitsy ny mpanendaka
Saiky isan’andro no handrenesana olona voaendaka ao anatin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana amin’ny lalana Ambodin’Isotry (Aigle noir), 67 Ha (garazy) miankandrefana, ary eny amin’ny Cenam Andavamamba. Basy Kalachnikov mihitsy no entin’ireo jiolahy hampihorohoroana amin’izany.
Manomboka eo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be izay fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Garazy 67 ha mandalo ny Cenam Andavamamba hatreny amin’ny sampanana hivily hihazo an’Anosibe no tena ahitana ireto jiolahy roa lahy mitondra basy Kalachnikov mifono lamba mampihorohoro ao anaty fitohanan’ny fifamoivoizana ireto. Toy izany koa, manjaka ihany koa ireto jiolahy ireto manomboka eny amin’ny fiantsonana Ankazomanga hatreny amin’ny Aigle Noir mivoaka eny 67 ha Atsinanana. Tsy eo ihany fa eo amin’ny fiantsonana 67 ha mianandrefahana mahazo an’Ampasika iny koa ny tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo olona lasibatra, kendren’izy roa lahy tsara ilay fotoana misy fitohanan’ny fifamoivoizana amin’ny antoandro sy hariva mahabetsaka ny fiara iny, amin’izay izy ireo no manao ny asa ratsiny. Mitsofoka mandeha eny anelanelan’ny fiara ry zalahy sady mitily ireo olona ao anaty fiara. Ny iray mampiresaka ireo olona ao anaty fiara mba hanome avy hatrany izay tadiavin’izy ireo, ny iray kosa mandrahona sy mandodona amin’ilay basy Kalachnikov ka mandrahona hitifitra rehefa tsy mety hanome mora foana izay tadiaviny ireo olona ao anaty fiara. Nilaza ireo niharan’ny fampihorohoroana fa na mihidy tanteraka aza ny varavaran’ny fiara rehetra sy ny fitaratra, mbola sahin’izy ireo dondomina hatrany amin’ny lohan’ny basy ihany ilay fiara.
Maro, araka izany, ireo efa nitondra faisana amin’ireto jiolahy ireto, araka ny loharanom-baovao voaray hatrany. Misy ireo tompona fiara sasany tsy manampo na inona na inona ka miditra avy hatrany ao anaty fiara mihitsy ry zalahy rehefa hitany fa tsy mihidy ilay fiara. Teren’izy ireo hamoaka izay tadiaviny ireo olona ao anaty fiara ka tsy afa-manoatra.
Mangataka ireo olona ny mba hijerena akaiky iny faritra iny…
Manao antso avo amin’ny mpitandro filaminana araka izany ireo olona mandalo amin’iny faritra iny mba hojerena akaiky ny fisian’ireto andian-jiolahy mampihorohoro amin’ny basy Kalachnikov ireto. Ireo fiara tratran’ny fitohanana amin’ny harivariva no tena mitondra faisana. Tsy vitan’izany fa misy koa ireo olona mandeha an-tongotra hariva mandalo amin’ny Cenam Andavamamba iny no mitondra faisana amin’ireo jiolahy. Tena batain’izy ireo izay sendra azy ka entin’izy ireo mitsofoka anelakela-trano ka any vao endahiny. Tsy afa-manoatra anefa ireo olona mahita ny fihetsik’ireo olon-dratsy manoloana ny fitaovam-piadiana any am-pelatanan’izy ireo.
Tokony hojerena akaiky iny faritra iny satria mihorohoro hatrany ny olona indrindra fa ireo mpiandry taxi-be amin’ny hariva.
Misy ihany ireo polisy mandamina fifamoivoizana eo 67 ha, saingy tsy kely lalana ny ratsy. Eo koa ireo polisy manao fisafoana amin’ny hariva sy manao fanamiana sivily mitily ireny jiolahy mampitondra faisana ireny. Nanamafy hatrany koa ny polisy fa tokony hampandre haingana azy ireo izay mahita olona mampiahiahy na trangan-javatra hafahafa eny an-dalana. Efa miasa rahateo ilay laharana maitso 117 ahafahana miantso ny polisy raha misy famonjena ilana maika azy ireo.